I-Semalt ichaza Izinzuzo Eziqakathekile Zokukhangisa Kwevidiyo
Amanye amabhizinisi akhiqiza okuqukethwe kwevidiyo kumawebhusayithi azo kanye namapulatifomu womphakathi. Ochwepheshe be-Search Engine Optimization (SEO) bavame ukucabangela amavidiyo njengomkhuba odlulayo ongahambisani nokuthuthukisa ukusebenza kwenhlangano. Ngaphezu kwalokho, abaphathi balezi zimabhizinisi bacabanga ukuthi ukukhiqizwa kwamavidiyo okuvamile kuyinto ebiza kakhulu. Kukhona nokwesaba ukuthi amakhasimende amaningi angase angaboni amavidiyo - other computer experts. Lezi zimfundiso ezingalungile mayelana nokumaketha kwevidiyo akuthinti kabi ukusebenza kwamabhizinisi.
Umphathi Wezokuthuthukiswa Kwekhasimende Semalt Amasevisi Wezinhlelo Zedivayisi, uMichael Brown ubonisa izinzuzo ezintathu eziyinhloko zamavidiyo emisebenzini yebhizinisi.
Amathuba ama-SEO aphumelelayo
I-SEO iyindlela ebalulekile yokumaketha ye-intanethi amabhizinisi amancane naphakathi namabhizinisi afanele. Noma kunjalo, ithimba ledijithali kufanele libe nelungelo ngoba insimu ye-SEO inamandla. Imithetho yokudayiswa kwedijithali iyahlolwa njalo. I-Google, injini enkulu yokusesha, iqhubeka nokufaka izinqubo ezintsha zokusesha ezingacaciswa kuphela ngamaqembu asemakethe okuthengisa ama-digital. Noma kunjalo, kubalulekile ukuthi abaphathi bamabhizinisi amancane noma aphakathiyo baqonde ukuthi okuqukethwe okulungile kwevidiyo kungathuthukisa isu le-SEO.
Okuqukethwe kwevidiyo kuqedela imibhalo nezithombe kwinqubo ye-SEO. Amavidiyo angabelwa kakhulu kuma-social media (i-Facebook, WhatsApp, ne-Instagram) kunama-athikili noma izixhumanisi zebhulogi. Izinga lokuhlanganyela eliphakeme lithuthukisa izinga le-SEO futhi likuvumela ukuba ukhombise amakhasimende atholakala. Ukusebenza kokuqukethwe kwevidiyo kungathuthukiswa usebenzisa isihloko esinamagama angukhiye asebenzayo. Amabhizinisi kufanele athuthukise futhi asebenzise okunye okuqukethwe kwevidiyo phakathi nenqubo ye-SEO ukuheha ngaphezulu kwamakhasimende.
Abanikazi bamabhizinisi amancane nabama-medium basebenzisa imithombo yezokuxhumana ukuze bahlanganyele namakhasimende ahlosiwe. U-Зeople usebenzisa i-media media ukuthengisa imikhiqizo emisha kumakhasimende. Abaphathi bebhizinisi nabo bathola impendulo ebalulekile mayelana nekhwalithi yemikhiqizo yabo kusuka kumakhasimende besebenzisa ukuxhumana komphakathi. Amabhizinisi aphumelelayo kumele athumele okuqukethwe okusha kokumaketha futhi aphendule imibuzo nemibuzo yabalandeli ngempumelelo.
Ukwethulwa kokuqukethwe kwevidiyo kuma-social media, ema-imeyili, nakwebhusayithi yenkampani kuthuthukisa isu le-SEO, kuthuthukisa ukuqwashiswa kwe-brand, futhi kubandakanya amakhasimende ahlosiwe. Ngokuthumela amavidiyo kuma-social media, ibhizinisi livula okuqukethwe kokumaketha ngokuhlanganyela. Isilinganiso sokwabelana esiphakeme sithuthukisa isithombe nomkhiqizo webhizinisi, ikakhulukazi uma ividiyo ihamba ngegciwane.
Ukuthengisa Imikhiqizo Nemisebenzi Yebhizinisi
Okuqukethwe kwevidiyo kuyithuluzi lokuthengisa nokuthengisa eliphumelelayo. Ukusebenzisa amavidiyo ukwenza amagoli ebhizinisi nokuhlanganisa amavidiyo kuma-imeyili kuthuthukisa isu lokuthengisa lenkampani. Abathengisi be-Smart bayaqonda ukuthi izinqumo zokuthenga zabasebenzisi be-intanethi bathonywa inqubo yokunakekela. Abanikazi bamabhizinisi kanye nabaphathi kumele baqonde ukuthi ukuhola okuholela kudala amathuba angama-20% okuthengisa kunamakholi angakhuliswa. Ukuthinta okuqukethwe kwevidiyo futhi kuholele umphumela wokwenza isinqumo sokuthenga. Isibonelo, i-demos yomkhiqizo ingathuthukisa ukuthengisa ngokubonisa izinzuzo zomkhiqizo kumakhasimende ahlosiwe.
Le vidiyo uhlobo olulandelayo lokuqukethwe, okwabelwana kabanzi ku-intanethi. Ngakho-ke, kubalulekile ukusebenzisa amavidiyo ekuthengiseni nasekuholeni izinqubo zokunakekela. Ukutshala imali kokuqukethwe kwevidiyo ye-SEO kanye necebo lokumaketha kwe-intanethi kungenye yezinqumo ezinhle kunazo zonke osomabhizinisi noma umphathi webhizinisi ongenza.